BNGRC Vonona amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary
Efa vonona tanteraka amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary ny birao nasionaly misahana ny loza na ny BNGRC.
Anisan’ny asa imasoan’izy ireo amin’izao ny fijerena ireo karazana fitaovana napetraka tamina toerana maro. Ho an’ny sambo, ohatra, dia jerena izy ireny raha mbola afaka hitatitra ireo olona hiharam-boina na tsia mandritra ny fotoana hitrangan’ny rivodoza. Toraka izany koa ireo magazay fametrahana entana izay mbola tena miasa na tsia. Nanatanteraka atrikasa goavana momba ny SAP ( Système d’alerte precoce) tetsy amin’ny Carlton niarahana tamin’ny PAM sy ny PNUD ny BNGRC omaly, notarihin’ny sekretera mpanatanteraka ny kolonely Elack Olivier. Solontenan’ny minisitera maro no nandray anjara izay hanome ireo tsara ho fantatra rehetra any aminy, hahafahana mandrafitra ny bileta laharana 0 an’ny SAP. Raha araka ny fanazavana azo mantsy dia nanaiky hamatsy vola ity tetikasa ity ry zareo Japoney nanomboka tamin’ny taona 2017 hahafahana miady amin’ny hanoanana any Atsimo raha nitsahatra tanteraka tamin’ny 2011. Volabe mantsy no tsy maintsy laniana. Hivoaka amin’ny volana oktobra izao ny bileta laharana voalohany an’ny SAP raha tsy misy ny sampona.